Kaonty momba ny fahasalamana amin'ny kaonty -
Tahaka ny vatan'olombelona mila fizahana ara-pahasalamana tsy tapaka mba hitombo sy hivoatra ary ho lava andro iainana, ny kaonty orinasa dia mila fanaraha-maso tsy tapaka ny 'fahasalamany'. Satria ny tanjona faratampon'ny orinasa dia ny hitombo sy hambinina amin'ny alàlan'ny fandrosoana tsy tapaka amin'ny varotra, tena zava-dehibe ny fananana an'io fitomboana io tsy misy fiatoana na sakana. Ny fahasalamana amin'ny kaonty mpivarotra dia mitovy amin'ny varotra tsara. Na izany aza, ny fanarahana ny refy isan-karazany amin'ny fahasalaman'ny kaonty mpivarotra dia mety ho asa sarotra. Nanjary sarotra kokoa aza izany noho ny haben'ny tsenan'ny asa an-tserasera. Ny fananana fanohanana hitari-dalana sy hanampy anao amin'ny fitazonana ny fifandanjana eo amin'ny taha voafetra voafetra, ny laharam-pahaterahana farany, ary ny tahan'ny fanafoanana mialoha sy fahatanterahana ary ny fivarotana tsara dia mety ho fanentanana lehibe ho an'ny orinasa ary hisorohana maharitra ny fisakanana ny kaonty.
Ny ekipanay dia manampy anao hitazona ny fahasalaman'ny kaontinao Amazon ary hanoro hevitra anao hitazomana ny fepetra marina amin'ireto masontsivana manaraka ireto:
Toro lalana momba ny fihenan'ny kilema
Fomba fiasa ho an'ny mpanjifa
Fikarakarana fanafoanana mialoha ny fanatanterahana
Ny fanamarinana ny fahasalamana amin'ny kaonty dia tsy mitazona ny fitomboan'ny orinasa tsy miovaova, fa manampy ihany koa ny fifandraisana tsara amin'ny mpanjifa. Ny ekipa APlus Global dia manolo-tena hanao ny orinasam-barotra e-commerce ho malama araka izay azo atao ho an'ny rehetra.
642 N Highland Ave, Los Angeles, NY